Otu esi eziga ngwugwu nke ọma na nhọrọ dị iche iche | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Anapụta na traceability
Ọ bụrụ na ị nwere eCommerce, mgbe ahụ ọ bụ ihe zuru oke maka gị ịkwadebe nchịkọta iji zigara ndị ahịa gị ngwaahịa gị. Mana ị maara otu esi eziga ngwugwu? Ihe dị mfe, ọ nwere ike ịbụ echiche mbụ nke onye ahụ ma nwedịrị ike ịme ka ha zụta ọzọ, ma ọ bụ gaa na asọmpi ọzọ.
Ebe ọ bụ na anyị achọghị ka nke a mee gị, taa anyị ga-agwa gị okwu esi zipu ngwugwu, ọ bụghị naanị maka nhọrọ mbufe nke ị nwere, kamakwa otu esi akwadebe ya na otu esi eme ka onye ahịa nwee ịhụnanya na-enweghị ọbụna mepee iji nweta ngwaahịa ha zụrụ. Ị dịla njikere?
1 Na-ahụ onye ahịa n'anya site n'èzí
2 Nkọwa dị mkpa mgbe ị na-ebufe ngwugwu
3 Ma ugbu a, kedu ka esi eziga ngwugwu?
3.1 Otu esi eziga ngwugwu na Correos
3.2 Zipu ngwugwu na Seur
3.3 Gbọ mmiri na MRW
3.4 Otu esi eziga ngwugwu na Mondial Relay
Na-ahụ onye ahịa n'anya site n'èzí
Cenata ngwugwu nwere ike ịbụ ihe na-atọ ụtọ maka ọtụtụ ndị ahịa. Eziokwu nke ichere ihe ha zụtara na-akpali ọtụtụ, ma ha na-eme ya n'ihi na ha ji ọ areụ na-eche ihe ha rịọrọ. Mana ọ bụrụ na ị na-emekwa ka ha nwee mmasị na nkwakọ ngwaahịa ahụ, mgbe ahụ n'ezie, mgbe a bịara n'ịzụ ọzọ, ha ga-etinye gị dị ka nhọrọ mbụ.
Ma ọ bụ ya pampering ahịa adịghị eri ihe dị ka i chere. Naanị ị ga-eburu n'uche nkọwa ndị ahụ, obere ihe ndị ahụ nwere ike ime ka ngwugwu mara mma. Ọmụmaatụ:
Jiri igbe nwere njirimara ụlọ ọrụ gị ma, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na nke a abụghị "anya". Nwere ike ịmepụta igbe nke gị nke akara ngosi gị ma ọ bụ akara ị nwere dị, mana nke ahụ na-agakọ na nhazi ikpeazụ. N'ụzọ dị otú a ị gaghị eziga igbe agba aja aja ndị na-adịbu (nke mechara bụrụ ahịhịa).
Chọọ maka igbe siri ike. Ee, ha dị oke ọnụ, na itinye ego ga-adị elu. Mana ọ bụrụ na ijikọ ya na nke dị n'elu, ị ga - eme ka ha jigharịa igbe ndị ahụ. Ọ bụghị naanị na ị ga-enyere gburugburu ebe obibi aka, kamakwa ị ga-eme ka ọ bụrụ na ị ga-ewetara gị ụlọ ma na-eme ka akara gị dị mma nye ndị otu niile, ezinụlọ, ndị enyi ... Kedu ihe ị ga-enweta na nke ahụ? Nweta ohere ndị ọzọ ị zụrụ karịa.
Gbalịa imechi ngwugwu ahụ na ihe na-egbu maramara. Uta, rịbọn na-adọta anya. Ihe ọ bụla na-enyere aka na visual ngwugwu gị ga-eme ka ọ ka mma ịnata. Ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ugbu a na-ese foto nke ihe niile dị na mbụ, nke na-adọta uche, ị nwere ike ịchọpụta na ndị ọrụ na-ebipụta igbe gị (ha ga-emepe ma emechaa iji were ihe ha zụtara).
Nkọwa dị mkpa mgbe ị na-ebufe ngwugwu
Ugbu a, ka anyị banye n'ime. Ọtụtụ ihe ha na-eme bụ buru igbe, tinye ngwaahịa ahụ na imechi. Olileanya, ha na-etinye ụfọdụ akwụkwọ ma ọ bụ ihe na-egbochi ngwaahịa ịkwaga n'oge njem gị, ma ọ bụ na-ewere igbe ebe ha dabara. Ma nke ahụ bụ ya.
Ma, Mgbe ndị ahịa zụrụ, ọ na-amasị ha, dị ka ndị ọzọ, ịnata ihe ịtụnanya. Ya mere, gịnị ma ị tinye ego na nkọwa ndị ahụ? Ihe nlele efu, akpa swiiti, ma ọ bụ ihe metụtara ngwaahịa ha zụrụ. Kwere ma ọ bụ na ekwetaghị, a na-echebara obere nkọwa ndị ahụ echiche n'ihi na, mgbe ha ga-azụta ọzọ, ha ga-achọ ụlọ ahịa ahụ na-ezigara ha karịa ihe ha zụtara.
Na mgbakwunye, n'ụzọ a, ị nwekwara ike kpọsaa onwe gị, dịka ọmụmaatụ na ngwaahịa na akara gị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na-ejedebe iji ya, ịchọrọ, na ọ bụghị mgbasa ozi n'efu ka ha na-emere gị.
Nkwado anyị bụ ka ị gbalịa imeziwanye ime ahụ, dịka ọmụmaatụ ịgbanye ngwaahịa na ngwugwu onyinye, na-agbakwunye ụfọdụ "obere nkọwa", ma ọ bụ ọbụna soro ndị ahịa na-egwuri egwu (igbe dị na igbe, na igbe).
Ma ugbu a, kedu ka esi eziga ngwugwu?
Anyị abịala na njedebe ikpeazụ, otu esi eziga ngwugwu. Ihe omuma a bara uru nye ndi nwere eCommerce na ndi na-enweghi ma ha bu ndi kwesiri izipu ihe na onye ozo (ma obu ulo oru).
Eziokwu bu na inwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ site na ebe ị nwere ike ọ bụghị naanị izipu ngwugwu site na Post Office (Ọ bụ ya kacha mara amara) mana ị nwekwara ike ịhọrọ maka ozi nzuzo. N'ezie, na eCommerce ha zigara ha otu a n'ihi na nke a na-eme ka o doo anya na iwu ahụ nwere ike iru onye ahịa n'ime awa 24 ruo 72.
Ma olee otu esi ebu ngwugwu ma mezuo ihe onye ọ bụla chọrọ? Anyị enweghị ike ịgwa gị gbasara ha niile, mana anyị ga-agwa gị ntakịrị gbasara ndị bụ isi:
Otu esi eziga ngwugwu na Correos
Correos nwere nnukwu mmesi ike na ngwugwu nwere ụfọdụ nha. N'ezie, ọ bụrụ na ha ekwenyeghị, ha nwere ike ịghaghachi iwu ahụ wee gwa gị ka ị jiri igbe pụrụ iche (ha) itinye ihe niile ịchọrọ izipu ka o wee kwekọọ na nhazi.
Dabere na ibu ahụ, ọnụego ga-adị iche, ebe ọ bụ na ha na-esite na ọkara kilo na ọkara kilogram. Ugbu a, ha nwere onyinye mbupu igbe dị iche iche ị nwere ike irite uru na ya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere kaadị nzi ozi pụrụ iche, ị nwere ike izipu iwu na ọnụ ahịa ahịa.
Banyere otu esi eziga ngwugwu:
Kwadebe ngwugwu n'ụlọ.
Hichaa aha mmado na nkọwa nnata. Mee ka ọ pụta ìhè ka ọ ghara inwe nsogbu. Kedu data? Aha na aha nna, adres zuru ezu, koodu nzi ozi, obodo. Ga-agbakwunye obodo ahụ ma ọ bụrụ na ị na-apụ na mpụga Spain.
Were ya na Post Office. Na Post Office ha ga-atụle ngwugwu ma gwa gị ọnụego ebe ọ bụ, dabere na ebe ọ na-aga (ọ bụrụ na ọ nọ n'otu obodo ahụ, ọ bụrụ na ọ dị na obodo ọzọ kwụ ọtọ ...) ọnụego ha na-akwụ gị ga-agbanwe.
N’ezie, belụsọ ma ị kwụkwuo ego, ngwugwu a enweghị “ụbọchị” ọ ga-abịa. O nwere ike were otu ụbọchị, abụọ, ma ọ bụ otu izu. Ọ dabere na etu ọrụ nzipụ ozi si aga ma n’obodo gị ma n’obodo ị na-aga.
Zipu ngwugwu na Seur
Ọzọ nke kasị mma mara ngwugwu ụlọ ọrụ bụ Seur. N'okwu a, ọ bụrụ na ị gaa na weebụsaịtị ha, ị ga-ahụ na ha nwere mpempe akwụkwọ maka izipu ngwugwu (enwere otu maka ndị mmadụ n'otu n'otu na onye ọzọ maka ụlọ ọrụ).
Ị ga-eme Gosi bụ ebe ngwugwu si, ebe ọ na-aga, ego ole ọ bara, ma ọ bụrụ na ịchọrọ mkpuchi maka ihe ị zigara (nke a bụ nhọrọ). Ihe ndị a ga-enyere gị aka ịhọrọ ma ọ bụrụ na ha eburu ya n'ụlọ gị ma ọ bụ buru ya gaa n'ọfịs na oge ọ ga-ewe iji nweta ya iji nweta ụgwọ ikpeazụ.
Gbọ mmiri na MRW
Na weebụsaịtị MRW ihe izizi nke pupụtara na ngalaba izipu bụ maapụ abụọ, nke ụwa na nke ọzọ bụ nke Spain. Nke a ga - eme ka ị họrọ otu mbupu mba ọzọ ma ọ bụ nke mba.
Ozugbo inyocha ya, Ha ga-agwa gị ka ị dee ebe ịchọrọ ka MRW bulie iwu ahụ, ebe ha kwesiri iwere ya, kedu ka esi nye ya na udu ya (dabere na ichoro ka eweputa ya n'oge na adighi anya, ma oburu na ha bu ndi "puru iche" (anumanu, nri na emebi emebi ma obu nri nke choro oyi, wdg). ị ga - enyerịrị onye zitere ya ma kwenye na "ịzụta" nke ngwugwu ngwugwu ahụ.
Otu esi eziga ngwugwu na Mondial Relay
N'ihe banyere Mondial Relay, usoro ị ga - emerịrị iji zipu ya bụ ihe ndị a:
Kwadebe usoro. Ọ dị mkpa ka ị kpachara anya na nha nke igbe ahụ, ebe ọ bụ na kachasị izipu bụ 120 cm ogologo; ma ọ bụ 150cm n'ogologo tinyere ogologo ogologo. Nakwa dị ka ibu, karịa nke 30 kilos. Ọ bụrụ na ọ ka ibu, ha enweghị ike izipu ya (ma ị ga - ekewa ya iji mezuo ọnọdụ).
Dabere na weebụsaịtị ya, ị chọrọ naanị gosi mba ị na-eziga ngwugwu ahụ, kedu nkọwa nke onye nnata gị na ibu ngwugwu ahụ. Ya mere, ọ ga-akara ọnụahịa maka mbupu ma rụọ ọrụ nke abụọ, nke ị na-ahọrọ usoro mbufe, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka achịkọta usoro gị (ọ dị ntakịrị ọnụ) ma ọ bụ buru ya gaa mkpọ uche.
N'ikpeazụ, ị ga-enwe naanị gosipụta ihe niile, mata onwe gị na weebụ wee kwụọ ụgwọ. Nke ahụ dị mfe!
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Anapụta na traceability » Esi zipu ngwugwu
Echiche azụmaahịa mbụ